Zvikonzero zvinoverengeka zvekudyara mune sirivheri | Ehupfumi Zvemari
Sirivheri mari yakanaka here? Sei munhu achifanira kuitenga? Zviri zvechisikigo uye kunyange zvine hungwaru kuti muzvinashawo azvibvunze kana chinhu chakakosha imari yakanaka kana kuti kwete. Izvi zvinonyanya kuitika kune sirivheri, sezvo iri musika mudiki uye isina huremu hwakaenzana negoridhe.
Iko kune mukana wekuti kana iwe uine panyama sirivheri, haisi iyo pakarepo mvura. Zvekuita zvakajairika kutenga senge grocery, haugone kushandisa sirivheri bullion mabhagi kana sirivheri bhuroni mari, saka uchafanirwa kuchishandura kuita mari kutanga, uye kugona kutengesa nekukurumidza kunogona kuva dambudziko.
Asi panguva ino munhoroondo, pane zvikonzero zvinogombedzera zvekuwedzera sirivheri chaiyo kune yako yekudyara portfolio (uye imwe chete ndeyekuti mutengo uchakwira). Heano zvikonzero zvepamusoro gumi nei muzvinabhizimusi wese achifanira kutenga sirivheri bullion ...
1 Sirivheri imari chaiyo
2 Sirivheri yakachipa
3 Maindasitiri anoshandisa
4 Kutenga sirivheri chaiyo
Sirivheri imari chaiyo
Sirivhi inogona kunge isiri chikamu chemari yedu, asi ichiri mari. Muchokwadi, sirivheri, pamwe chete negoridhe, ndiyo fomu yekupedzisira yemari, nekuti haigone kugadzirwa nemweya mutete (uye nekudaro yakadzikira) kunge mapepa kana mafomu edhijitari. Uye nemari chaiyo, tinoreva sirivheri yemuviri, kwete ma ETF kana zvitupa kana zvibvumirano zvemangwana. Ndiwo mapepa ekudyara, ayo asingatakure iwo mabhenefiti mamwe auchazowana mune uyu mushumo.
Sirivheri yenyama chitoro chakakosha, segoridhe. Heino chikonzero.
- Iko hakuna mukana wekubiridzira. Kana iwe uine mari yepanyama, haudi imwe bato kuzadzisa kondirakiti kana kuvimbisa. Izvi hazvisizvo nemasheya kana zvisungo kana chero imwe mari.
- Haisati yambotyorwa. Kana iwe uine yako chaiyo sirivheri, iwe hauna njodzi yekukanganisa. Kwete zvakadaro kune chero imwewo mari yaunogadzira.
- Yekushandisa-kurefu semari. Kuongororwa kwenhoroondo yemari kunoratidza kuti sirivheri yakashandiswa mukugadzira mari kakawanda kupfuura goridhe!
Sekutaura kwaMike Maloney mune wake-mutengesi-wakanaka, A Nhungamiro yeKuisa Mari muGoridhe neSirivheri, "Ndarama nesirivheri zvakayemura kwemazana emakore uye zvakadaidzira kuzvidavirira kwekunyepedzera."
Kuva neyesirivheri chaiyo inokupa iwe pfuma chaiyo iyo yakashanda semari kwezviuru zvemakore chaizvo.
2 Sirivheri yenyama chinhu chakaoma
Pane zvese zvekudyara zvaunazvo, mangani aungave uripo?
Munyika yemapepa muhoro, dhijitari kutengeserana uye kusikwa kwemari, sirivheri yemuviri inomira musiyano wakasiyana nechimwe chezvinhu zvishoma zvaunogona kutakura chero muhomwe yako, kunyangwe kune imwe nyika. Uye zvinogona kuve zvakavanzika uye zvakavanzika sezvaunoda. Sirivheri yepanyama zvakare inodzivirirwa zvinooneka kubva pamhando dzese dzekupaza nehutsotsi hwepamhepo. Iwe haugone 'kudzima' Eagle sirivheri mari, semuenzaniso, asi izvo zvinogona kuitika neine dhijitari aseti:
Ko kana ndikakuudza kuti iwe unogona kutenga chakaoma pfuma pa1 / 70 mutengo wegoridhe uye kuti ichakuchengetedza pamwe chete padambudziko?
Ndizvo zvaunowana nesirivha! Izvo zvinodhura zvakanyanya kune wepakati investor, uye zvakadaro sesimbi yakakosha ichabatsira kuchengetedza yako mwero wekurarama wakanaka segoridhe. Kana iwe usingakwanise kutenga rose ounce regoridhe, sirivheri inogona kuva yako tikiti kune zvimwe zvakakosha simbi. Izvi ndezvechokwadiwo nezvipo. Haudi kushandisa anodarika madhora chiuru pachipo asi ungade kupa yakaoma pfuma? Sirivheri inoita chete kuti iwedzere kudhura.
Sirivheri inoshanda zvakanyanya kudiki kwezuva nezuva kutenga. Sirivha haina kungodhura chete kutenga, inogona kuve inoshanda kana iwe uchida kutengesa. Pamwe rimwe zuva iwe haudi kutengesa ounce rese regoridhe kuti uwane zvido zvidiki zvemari. Pinda sirivheri. Sezvo inowanzo kuuya mumasangano madiki pane goridhe, unogona kutengesa chete zvaunoda kana zvaunoda panguva iyoyo.
Wese investor anofanirwa kunge aine sirivheri nekuda kweichi chikonzero.
Ramba uchifunga kuti sirivheri mabhuru emari nemazariro anogona kutengeswa chero kupi zvako pasi.
Sirivheri inopfuura yegoridhe mumisika yemombe
Sirivhi musika mudiki kwazvo, mudiki kwazvo, muchokwadi, zvekuti mari shoma inopinda kana kusiya indasitiri inogona kukanganisa mutengo zvakanyanya kupfuura zvimwe zvinhu (kusanganisira goridhe). Izvi zvakawedzera kusagadzikana zvinoreva kuti mumisika yebere, sirivheri inodonha kupfuura goridhe. Asi mumisika yemombe, sirivheri ichawedzera kure uye nekukurumidza kupfuura goridhe.
Heano akati wandei eemhando mienzaniso ... tarisa kuti yakawanda sei sirivheri yakagadzirwa kupfuura yegoridhe mumisika mikuru miviri yenzombe yesimbi yakakosha yenguva yazvino:
Sirivheri inoshandiswa muhuwandu hwakawanda hwemaindasitiri uye zvigadzirwa, uye mazhinji acho anoshandiswa ari kukura. Heano mimwe mienzaniso ...
- Nharembozha ine chinenge chetatu chegiramu resirivheri, uye kushandiswa kwefoni mbozhanhare kuri kuramba kuchikura zvisingaite pasirese. Gartner, kambani inotungamira yekutsvagisa ruzivo uye kambani yekupa mazano, inofungidzira kuti huwandu hwemamiriyoni emazana mashanu nemazana mashanu ezviuru emafoni achatengwa pakati pegore ra5.750 na2017.
- Iyo yekudziya-yega yekudziya mhepo paVolkswagen yako nyowani ichave ne-yakasviba-yakatetepa isingaonekwi nhete yesirivheri panzvimbo yeaya madiki tambo. Vanozove vane mafilamu pazasi pefafitera yemhepo yekupisa maoipers kuti vasaite girazi pagirazi.
- Iyo Instituto de la Plata inofungidzira kuti kushandiswa kwesirivheri mumasero e-photovoltaic (izvo zvikuru zvikamu zvemagetsi ezuva) zvichave zvichikwidza 75% kumusoro muna 2018 kupfuura makore matatu apfuura.
- Chimwe chinhu chinowanzoitwa nemaindasitiri kushandiswa kwesirivheri senge chinokonzeresa kugadzirwa kweethylene oxide (yakakosha yekutanga mukugadzirwa kwepurasitiki nemakemikari). Iyo Instituto de la Plata mapurojekiti ayo nekuda kwekukura kweiyi indasitiri, 2018% imwe sirivheri ichazodiwa na32 kupfuura yaishandiswa mu2015.
Kune mimwe mimwe mienzaniso yakaita seiyi, asi chinonyanya kukosha ndechekuti nekuda kwehunhu hwayo hwakasarudzika, kushandiswa kwemaindasitiri kwesirivha kuri kuramba kuchikura, zvinoreva kuti isu tinogona kutarisira zvine musoro kuti sosi iyi yekuda irambe yakasimba. Asi haisi iyo nyaya yese… kusiyana negoridhe, sirivheri yakawanda yemabhizimusi inodyiwa kana kuparadzwa panguva yekugadzirwa. Hazvina mari kudzoreredza yega yega sirivheri flake kubva kumamirioni ezvakaraswa zvigadzirwa. Nekuda kweizvozvo, sirivheri yaenda zvachose, ichidzikamisa huwandu hwezvinhu zvinogona kudzoserwa kumusika kuburikidza nekudzokorodza.
Saka hazvingori chete izvo zvicharamba zvichikura zvekushandisa kwemaindasitiri zvichichengeta kudiwa kwesirivha yakasimba, asi mamirioni emaunzi haagone kushandiswa zvekare. Icho chingave chinetso, nekuti ...
Sezvaungave iwe uchiziva, mutengo wesirivheri wakadonha mushure mekukwira muna2011. Mumakore mashanu akatevera yakawa ne72,1%. Nekuda kweizvozvo, vashandi vemumigodhi vaitofanira kunetsekana kudzikisa mutengo kuti vawane purofiti. Imwe yenzvimbo dzakadzikiswa zvakanyanya ndiko kutsvagisa nekusimudzira kwemigodhi mitsva yesirivheri.
Hazvitorere musayendisiti we rocket kuti anzwisise kuti kana nguva shoma nemari zvikashandiswa kutsvaga sirivheri, sirivheri ishoma ichawanikwa. Kusanaya ikoko mukutsvaga uye kusimudzira kuri kutanga kutora mutero.
Kufanana nezvimwe zvese zviri pamusika, kuisa mari musirivha bullion kune zvese zvayakanakira nezvayakaipira, uye izvo zvinokwezva kune mumwe muzvinabhizimusi zvinogona kunge zvisiri zvakanaka kune mumwe.
Sirivheri ichangobva kubuda kubva pagore rakabudirira kupfuura zvayakamboona mune imwe nguva, uye sezvo mutengo wesirivheri uchikwira, vatyairi vazhinji vanofarira musika wesirivheri vanoshamisika kana ino inguva chaiyo yekutenga sirivheri chaiyo uye voita chikamu chako mari yekudyara.
Nepo sirivheri ichigona kuve isingachinjiki, iyo simbi yakakosha inoonekwawo seyeti yekuchengetedza, yakafanana nehanzvadzi yayo simbi yegoridhe - senhumbi dzakachengeteka, dzinogona kudzivirira varimi munguva dzekusagadzikana. Nemakakatanwa achikwira, vanogona kuve vakaringana kune avo vari kutsvaga kuchengetedza hupfumi hwavo munguva dzino dzakaoma.
Tine zvinhu izvi mupfungwa, ngatitarise pane zvakanakira nezvayakaipira zvekutenga mabara egoridhe chaiwo ari sirivheri.
Zvakanakira kudyara mune sirivheri bullion
Sezvambotaurwa, varimi vemari vanowanzomhanyira kune simbi dzinokosha munguva yedambudziko. Kana kusagadzikana kwezvematongerwo enyika nehupfumi kuri kukuru kwazvo, nyoro yepamutemo inowanzo gara pachigaro chekumashure kuzvinhu zvakaita segoridhe nesirivheri. Nepo zvese goridhe nesirivheri bhurioni zvichikwezva kune vanoita mari, iyo chena simbi inowanzo kufuratirwa mukufarira vanhu vanoisa mari mugoridhe, kunyangwe ichitamba zvakafanana basa.
Imari inobatika - Kunyange hazvo mari, migodhi yemari, mabond, uye zvimwe zvigadzirwa zvemari zvichitambirwa mafomu ehupfumi, iwo angangove manyorerwo edhijitari. Nechikonzero ichocho, vese vari panjodzi yekudzikira nekuda kwezviito sekudhinda mari. Sirivheri bullion, kune rimwe divi, ipfuma inooneka. Izvi zvinoreva kuti kunyange hazvo iri panjodzi yekuchinja kwemusika senge zvimwe zvinhu, sirivheri chaiyo haigone kudonha zvachose nekuda kwehunhu hwayo uye kukosha kwayo. Vatori veMusika vanogona kutenga goridhe mabhuru nenzira dzakasiyana, senge mari yesirivheri kana zvishongo zvesirivheri, kana ivo vanogona kutenga sirivheri bullion mabara
Chris Duane, muzvinabhizimusi uye nhamba yeYouTube, akataura kuti anoisa simbi yake pamuromo wake nekumisa midziyo yake uye nekuisa mari musirion bullion kana mitengo yadzikira. Anotenda kuti hurongwa hwedu hwemari, uye nemararamire edu ese, zvakavakirwa pachikwereti chisingachinjiki, uye chinangwa chekudyara sirivheri bullion nemusika wesirivheri kuzvisimudza kubva mukuparara kwemasvomhu kusingadzivisike kweiyo.
Iyo yakachipa pane yegoridhe - Pakati pemabhawa egoridhe nemabhawa esirivheri, machena machena haangori anodhura chete uye nekudaro ari kuwanika pakutenga, asi zvakare iri kuita zvakasiyana-siyana kushandisa. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uri kutsvaga kutenga sirivheri mune fomu yemari kuti ushandise semari, zvichave nyore kupaza pane mari yegoridhe, nekuti ine yakaderera kukosha. Kungofanana nemadhora zana emadhora anogona kuva chinetso kupaza muchitoro, kugovera mabhawa egoridhe kunogona kuva kwakaoma. Nekuda kweizvozvo, sirivheri bullion inoshanda zvakanyanya uye inochinja-chinja pane yegoridhe chairo, ichiita kuti mhando yemari yesirivheri ive inokwezva.
Nekuti iyo chena simbi yakakosha nezve 1/79 yemutengo wegoridhe, kutenga sirivheri bullion inodhura uye yakanyanya yakakwira muzana purofiti inogona kuoneka kana mutengo wesirivheri ukakwira. Muchokwadi, munguva yakapfuura, sirivheri yakapfuura mutengo wegoridhe mumisika yemombe, maererano neGoldSilver. GoldSilver inoti, kubva muna2008 kusvika 2011, sirivheri yakawana mazana masere nemakumi masere nesere muzana, ukuwo mutengo wegoridhe wakangowana zvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu chete panguva iyoyo. Izvo zvinokwanisika kune muzvinashawo kuti avhare mabheti ake nesirivha bullion mune yake yekudyara portfolio.
Nhoroondo iri kudivi resirivheri - Sirivheri nendarama zvakashandiswa sethenda zviri pamutemo kwemazana nezviuru zvemakore, uye mutsara iwoyo unopa simbi pfungwa yekugadzikana. Vazhinji vanowana nyaradzo nekuziva kuti iyi simbi yakakosha yakaverengerwa kukosha kwayo munhoroondo zhinji dzevanhu, uye nekudaro pane tarisiro yekuti ichatsungirira sekureba sekunge mari yefiat ingawira munzira. Kana vanhu vakaisa mari mune sirivheri chaiyo, kungave nekutenga bhavha resirivheri, sirivheri yakachena, mari, kana imwe nzira, pane vimbiso yekuti kukosha kwayo kwakaramba kuripo uye kucharamba kuchiramba.
Sirivheri inopa kusazivikanwa - Kunyangwe iwe uchikoshesa kuvanzika kwako kana kwete, sirivheri ine bhenefiti yakafanana nemari, sezvo ichipa vashandisi degree rekusazivikanwa zvine chekuita nemari. Haasi munhu wese anoda kuti zvese zvavanoita zvive chikamu chechinyorwa cheveruzhinji, uye kuvanzika chinhu chakakosha chedemokrasi, sekureva kwaTED Talk yaGlenn Greenwald. Ndiyo imwezve rubatsiro kune vanoita mari avo vanoda kutenga sirivheri bhururu.
Idzo kudzikira kwekudyara mune sirivheri bullion
Kushaikwa kwemari - Pane mukana wekuti kana iwe uine panyama mari, inogona kunge isingaite mvura pakarepo. Zvekuita zvakajairika kutenga senge grocery, haugone kushandisa sirivheri bullion mabhagi kana sirivheri bhuroni mari, saka uchafanirwa kuchishandura kuita mari kutanga, uye kugona kutengesa nekukasira kunogona kuva dambudziko. Mune jam traffic, zvitoro zvepawn uye jewelers sarudzo, asi kwete iyo inonyanya kubhadhara.
Umbavha Njodzi - Kusiyana nedzimwe mari zhinji, senge masheya, kubata sirivheri bullion kunogona kusiya varimi vari munjodzi yekuba. Kuchengetedza zvinhu zvako kuti zvisabirwa uchishandisa chengetedzo kubhangi kana chengetedzo kumba kwako zvinowedzera mari. Zvakare, iyo yakawanda yemuviri midziyo, kusanganisira sirivheri zvishongo, inogara mumba mako, inowedzera njodzi yekuba.
Kudzoka kwakaneta mukudyara - Kunyangwe sirivheri bullion inogona kuve yakanaka chengetedzo pfuma, inogona kusakwanisa kuita pamwe nedzimwe mari - semuenzaniso, real estate, kana zvimwe zvimwe simbi.
Kuchera zvigodhi kunogona zvakare kuve iri nani sarudzo pane sirivheri bhurioni kune vamwe varimi. Sezvo Randy Smallwood, purezidhendi uye CEO wekambani yekushambadzira Wheaton Precious Metals (TSX: WPM, NYSE: WPM), yataura, "Makambani ekufambisa anogara achikunda mabhuroni pachawo." Anofungidzira izvi mukukura kwehupenyu uye dhivhidheni kubhadhara uko goridhe mabhawa asingape. Dzimwe sarudzo dzevatyairi vanofarira sirivheri dzinosanganisira kuisa mari mune yekutsinhana-inotengeswa mari kana ramangwana resirivha.
Vezvemari pavanoedza kutenga chero chigadzirwa chemabhuru, senge mari yesirivheri yekuAmerica inozivikanwa se "Silver Eagle," vanozoona nekukurumidza kuti mutengo wepanyama wesirivheri unowanzo kwira kupfuura mutengo wepasi wesirivheri nekuda kweprimiyamu yakatarwa. Nevatengesi. Zvakare, kana kudiwa kuri pamusoro, maprimiyamu anogona kukwira nekukurumidza, zvichiita kuti kutenga kwesirivheri bhurioni kudhure uye mari inokwezva isinganakidze.
Kutenga sirivheri chaiyo
Nzira yakajeka yekudyara mune sirivheri ndeyekuenda kunotenga simbi chaiyo. Sirivheri mabara anowanikwa mune ese emari uye emafomu mafomu, uye mari zhinji uye vatengesi vanokosha vesimbi vanopa mabhavha esirivha mumhando dzakasiyana siyana uye mafomati. Kazhinji, iwe unogona kuwana mari uye mabhawa madiki senge imwechete ounce, kana hombe mabhaundi mabharoni akakura semaunce chiuru.
Kuva nemabhawa esirivheri kune mukana wekuti kukosha kwawo kunotevera mutengo wemusika wesirivha zvakananga. Nekudaro, kune akati wandei ekudzikira. Kutanga, iwe unowanzo bhadhara shoma shoma kutenga sirivheri kubva kune vatengesi, uye iwe unowanzo fanirwa kubvuma kushomeka padiki kana iwe wafunga kuidzosera iyo kumutengesi wako. Kana iwe uchitarisira kuchengeta sirivheri yako kwenguva yakareba, saka izvo zvinodhura hazvisi zvakakura, asi kune avo vanoda kutengesa kazhinji, ivo vanowanzo kudhura zvakanyanya kutakura kanoverengeka zvakateedzana. Uye zvakare, kuchengetedza mabara egoridhe kunosanganisira mamwe matambudziko ezvekushandisa pamwe nemari dzekuwedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvikonzero zvinoverengeka zvekudyara mune sirivheri